Isku-darka Rottweiler Lab: Tilmaamaha Tilmaamaha eeyaha Labrottie Dog - Taranka
Isku-darka Rottweiler Lab: Tilmaamaha Tilmaamaha eeyaha Labrottie Dog
Rottweiler Lab Mix wuxuu leeyahay naaneysyo fara badan Labrottie ilaa Rottwador. Wax kastoo dadku go'aansadaan inay ugu yeeraan eygan, hal shay ayaa hubaal ah, iyagu waa eey u janjeedha dhanka reer u janjeedha !
Waxay ku imaan karaan dhammaan hooska, qaababka iyo cabbirrada.
Caadi ahaan eeygan wuxuu leeyahay wejiga iyo madaxa Labrador oo leh jirka Rottweiler; indho qurux badan oo bunni weyn leh!
Sida iskudhaf isku dhafan oo udhaxeeya Rottweiler iyo Labrador, lama dhahayo dabeecada ay yeelan doonaan. Waxay dhaxli lahaayeen kalgacalka iyo dhinaca jecel ee Labrador ama daacadnimo kulul oo ka socota Rottweiler.
Noocan eyga weyn ayaa ku habboon milkiile khibrad leh, maadaama ay u baahan yihiin tababarro badan iyo is dhexgal bulsho.
Aynu sahamino eeygan si faahfaahsan ...
Waa Maxay Isku-darka Rottweiler Lab?
Aqoonsiga Naa'ibadda Guri iyo Hiddo
Rottweiler Lab Mix Puppies Eey
Cabbirka Isku-darka Shaybaarka Rottweiler iyo Muuqaalka
Tilmaamaha Daryeelka Dhameystiran ee Rottweiler iyo Lab Mix
Labrotiyooyinka ayaa ah eeyaha-jecel iyo eeyaha kalgacalka leh had iyo jeer socod ama ciyaar.
Isku darka Rottweiler iyo Labrador wuxuu sameeyaa ciyaar aad u fiican.
Ragaani dabacsan ayaa ah kuwa ugu fiican labada adduunba iyagoo soo bandhigaya astaamaha ugu wanaagsan waalid kasta . Waxay isugu jiraan kuwo saaxiibtinimo, kalgacal, firfircoonaan iyo daacadnimo leh!
In kasta oo lagu kala soocay qaybaha cayaaraha iyo eeyaha shaqeeya, maadaama labada waalidba ay yihiin eey shaqeeya, Labrottie-ka waxaa badanaa loo adeegsadaa eey wehel ah, oo ku faraxsan inuu kugu raaco socod dheer ama socod.
Isku-darka Rottweiler Lab waa isku-dhaf si dhakhso leh isugu soo dhowaaday oo markii ugu horreysay ka soo muuqday Mareykanka 1990-yadii , sidaa darteed ma haystaan ​​taariikh badan sida waalidkood daahir.
Labradors wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Newfoundland, halkaas oo ay kalluumeysatada u raaci lahaayeen inay u soo shaqo tagaan.
Iyagu waa dad dabbaasha oo aad u fiican, dib u soo ceshada walina awood u leh inay si fudud afkooda ugu qabtaan ugaarsiga adigoon dhaawicin . Markii ay yimaadeen Ingiriiska 1820-kii waxay aad u noqdeen caan sida eyda wax cunaya ee ugaarsatadu sidoo kale.
Waxaa loo maleynayaa in Rottweilers ay ahaayeen natiijada ka gudbaya Adhijirka Jarmalka iyo Mastiff xilligii Boqortooyadii Roomaanka.
Ay ahaayeen lo'da lo'da iyo xeryaha ilaaliya, waana sababta ay u leeyihiin dareen dabiici ah oo ay ku ilaashadaan qoyskooda.
Cunsurka ayaa markaa loo adeegsaday booliis, waardiye iyo shaqo millatari intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.
Maaddaama Labrottie uu yahay iskutallaab udhaxeysa purebred Rottweiler iyo Labrador; Naadiga Kennelka Mareykanka ma aqoonsana iyaga.
Tani waxay ka dhigan tahay inaysan jirin heerar rasmi ah oo ah noocyada jinsiyadaha ama waraaqaha dhalashada.
Si kastaba ha noqotee, maadaama waalidkood ay yihiin kuwo nadiif ah waad eegi kartaa geedka reerkooda iyo abtirsiintooda .
Isku-darka Rottweiler Lab wuxuu si kastaba ha ahaatee u aqoonsan yahay ururo kale oo badan sida:
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka
Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Naadiga
Diiwaanka Eyga ee Mareykanka
Diiwaan Geliyaha Tartanka
Rottweiler Lab qas Eyga Macluumaadka Nooca
Cabir 24 ilaa 27 ″ si ay u engegaan
Miisaanka 70 ilaa 115 rodol
Nolosha qofka 9 - 12 sano
Nooca Taranka Wehel
Ujeedo Isku qas iyo Inbadan
Ku Haboon Qoysaska Firfircoon iyo Maamulayaasha Khibrada Leh
Kala duwanaanta Midabka Madow, bunni, Cawl iyo Madoow iyo Tan
Dabeecad Difaac, Daacadnimo, Jacayl, Qoys ku jahaysan oo Caqli badan
Magacyo Kale Rottwador, Labweiler iyo Labrottie
Maaddaama Labrotties ay yihiin kuwo isku dhafan oo ah laba nooc oo waaweyn, lab iyo dheddig oo yaryar ayaa aad u weynaan doona cabir ahaan; ha la yaabin markii aad il bilqayso, aad aragto eeygaaga inuu weynaaday markale!
Eygaaga yar ayaa si dhakhso leh u kori doona toddobada bilood ee ugu horreysa oo uu si buuxda u kori doonaa markuu laba sano jiro.
Cunug yar oo 8-toddobaad jir ah oo loo yaqaan 'Rottweiler Lab Mix puppy' ayaa culeyskiisu yahay qiyaastii 15 rodol.
Miisaanka Yar (rodol)
Miisaanka ugu badan (rodol)
3 labaatan 27
9 konton 65
A Rottweiler Lab Mix puppy waxay u badan tahay inay ku kacdo $ 300 ilaa $ 600 .
Si kastaba ha noqotee, kharashaadka caafimaadku waxay u dhexeeyaan $ 450 ilaa $ 600 sanad walba sidoo kale, marka iibsashada eeygan uusan qaali ahayn, bixinta qarashkooda caafimaad ayaa noqon doona.
Eydu waxay caadi ahaan ku dhashaan qashin waaweyn oo waaweyn (oo ah 6 ilaa 10 eey yaryar).
Markaad eegto indhahaa waaweyn ee quruxda badan ee bunniga ah, ma awoodi doontid inaad ka joojiso naftaada inaad hal guri keento!
Haddii aad rabto resuce Rottweiler Lab Mix, waxaa jira ururo waaweyn oo heegan u ah badbaadinta iskutallaabyada Rottweiler.
Waxay kuxirantahay inta dabeecadda Rottweiler eeygaagu qaato, waxaad isku arki kartaa naftaada eey aad u ilaaliya .
Tani waxay ka dhigeysaa inay u badan tahay inaysan hubin shisheeyaha oo ay ku ciyi doonaan. Haddii aysan tababbarin ama bulshada la dhexgelin tani waxay isu rogi kartaa gardarro aan loo baahnayn .
Dhinaca kale, waxaad isku arki kartaa eey leh inta badan dabeecad Labrador ah .
Xaaladda jirta, waxaad filan kartaa eey saaxiibtinimo iyo daacadnimo badan leh. Ku soo dhawaynta asxaabtaada iyo qoyskaaga waxa kaliya lagu tilmaami karo dhoolla caddaynta iyo dabada gilgisha.
Isku darka labadaba waa isku-dhafka ugu fiican, taasoo keentay in eey-jecel iyo eey kalgacal leh heerar adag oo daacadnimo iyo ilaalin ah.
Sidee eeygu ula dhaqmaa carruurta, eeyaha iyo xayawaanka rabaayaddu waxay inta badan ku xirnaan doontaa dabeecadda waalidka ee inta badan ku badan.
Way illoobi karaan inta ay le'eg yihiin. Markaa hubso in xoogaa qallafsan iyo buuq uusan helin wax aad u qallafsan.
Gaar ahaan carruurta yar yar, maadaama carruurta yar yar farxad ka bixi karto oo aan daruuri u aqoon doonin sida loola dhaqmo eeyaha waaweyn.
Markaa haddii aad leedahay qoys leh carruur yaryar waa laga yaabaa inaad rabto in laga fiirsado nooc kale .
Isku-darka Rottweiler Lab wuxuu ilaaliyaa qoyskooda, sidaa darteed ma noqon doono soo dhaweynta ugu badan ee xayawaanka cusub ama eeyaha. Haddii aad u keento qoyska sida eey oo kale ah tani waxay ka caawin doontaa inay wada noolaadaan.
Haddii bulsho ahaan laga soo bilaabo da 'yar , Labrotties-gaagu wuxuu noqon karaa mid aad u kalgacal leh oo soo dhaweyn kara dhammaantood.
Waxay kugu kalifin doonaan inaad kula jeclaato dabeecadooda maad iyo qosol leh.
Kuwani khiyaanooyinka isku dhafan ee jacaylka leh ayaa xoogaa ah feejignaan dooneyaal, doonaya dhammaan jacaylka iyo dareenka ay ka heli karaan milkiilayaashooda.
Talooyinku waxay lahaan karaan dhinac dagaal, laga dhaxlay Rottweiler , laakiin jacaylka iyo daacadnimada ka socota Labrador waxay ka caawisaa sidii loo soo dhex saari lahaa.
Eygan xiisaha-jecel waligiis maya oran maayo ciyaar is jiid jiid ah ama soo doonasho.
Isku-darka noocan ahi wuxuu u yaraan karaa sida Labrador (oo ah 24 inji) laakiin wuxuu kaloo gaari karaa cabbirka Rottweiler-ka oo ah 27 inji.
Waa inaad tan tixgelisaa markaad wax iibsanayso eey, maxaa yeelay ma ogaan doontid inta ay la egyihiin illaa ay ka gaarayaan laba sano jir.
Taataabooyinku waa loo aqoonsaday eey weyn , si ay culeys ugu heli karaan meel kasta oo ka bilaabanta 70lb ilaa 115lb!
Quruxda dabeecadda isweydaarsiga waligaa ma ogaan kartid waxa aad heli doontid.
Marka laga hadlayo Isku-darka Rottweiler Lab, waxaan ognahay inuu noqon doono eey weyn oo timo gaaban iyo dhego jilicsan.
Badanaa maahan, way yeelan doonaan muuqaalada wajiga Labrador , iyo jirka muruqyada ee Rottweiler.
Taas macnaheedu maahan in eeyahaagu inta badan aysan u ekaan karin sida Labrador ama Rottweiler.
Waxay sidoo kale yeelan karaan astaan-ganacsi sumadeed madow iyo midab buluug ah oo Rottweiler ah sidoo kale.
Jaleeco deg-deg ah, waad ku khaldami kartaa isku-darkaan 'Rottweiler' saafi ah. Si kastaba ha noqotee, kormeer dhow waa inaad ku ogaataa madax yar oo leh daaman dhuuban iyo duufaan dheer oo shaybaarka ah.
Waad ku mahadsan tahay waalidkood, jaakada eyda Labrottie waxay ku imaan kartaa midabyo kala duwan: madow, shukulaato la afuufay, cawl ama qaabka caadiga ah ee Rottweiler madow iyo tan .
Shukulaatada Sheybaarka Rottweiler-ka ah iyo isku darka madow iyo tan ayaa ugu caansan.
Madow iyo cirro ayaa midabbo aad u dhif ah.
Waxay leeyihiin cufan jaakad laba jibbaaran , tani waxay ka caawineysaa inay ahaadaan kuwo diirran oo aan biyo-gelinayn xilliga qaboobaha
Waxay noqon kartaa mid gaaban ama mid dherer dhexdhexaad ah oo toosan ama ruxruxa.
Isku-darka Rottweiler Lab wuxuu si caddaalad ah uga careysan yahay qaybta qurxinta.
Koodhadhkooda gaaban, buraash deg deg ah oo leh nabarro jilicsan toddobaad kasta ayaa ku filan inay ku ilaaliyaan jubbadohooda inay u muuqdaan kuwo caafimaad qaba oo dhalaalaya.
Maaddaama cimiladu bilaabmayso inay kululaato, waxay bilaabi doonaan inay wax yar daadiyaan sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad ku darto burush dheeraad ah halkan iyo halkaas.
Noocani firfircoonaan waligiis dhihi maayo socod ama ciyaar, marka ugu yaraan hal qubeys bishiiba waa inuu udgoon u yeeshaa ur cusub. Waxaa lagugula talinayaa inaad cadayato ilkahaaga Rottadors ugu yaraan laba illaa saddex jeer usbuucii.
Sida ey kasta oo kale, jarista ciddiyaha iyo hubinta dhegaha waa in si joogto ah loo sameeyaa.
Isku-darka quruxda badan wuxuu ku imaan karaa qaabab, cabbirro iyo midabbo kala duwan.
Ahaanshaha weyn ee cabirka, iyo rabitaanka xoogan, eeyahaani waxay ku fiican yihiin guriga dadka waaweyn kaliya oo leh kalsooni iyo khibrad leh oo raadinaya wehel firfircoon oo leh baahiyo qurxin oo hooseeya.
Hagaha 1,700 ilaa 2,000 kaloori
Noocyada waaweyn waxaa ugu fiican haddii aad doorato cunno yar yar oo badan halkii aad ka dooran lahayd hal cunto oo weyn si looga fogaado buurbuur .
Isku-darka Shaybaarka Rottweiler, saddex cunno maalintii waa inay noqdaan kuwo ku filan:
8AM - Quraac
1PM - Qado
6PM - Casho
Noocan ayaa loo qoondeeyay buurnida, sidaas darteed xakamaynta qaybta iyo jimicsiga joogtada ah waa lama huraan!
Waxaa jira quudin badan eeyo qalalan oo loo sameeyay eeyaha waaweyn, oo ay ka buuxaan fitamiino iyo nafaqooyin si ay ula kulmaan baahidooda.
Kuwa ugu fiican waxay yeelan doonaan waxyaabo badan oo dabiici ah waxayna inta badan ka koobnaan doonaan borotiinka ku saleysan xayawaanka.
Labrottie ayaa soo muuqan kara sida nooc ka mid ah xayawaanka , laakiin waxay ka buuxan yihiin tamar waxayna u baahan yihiin jimicsi fara badan.
Waxaa lagugula talinayaa in eeygaagu leeyahay 60 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii.
Muddo toddobaad ah, waa inay lugeeyaan qiyaastii 12 mayl.
Tan waxaa loo kala qaybin karaa laba socod oo 30 daqiiqo ah, mid subaxdii iyo mid fiidkii ah. Haddii aad ku nooshahay gobollo kulul, jimicsiga eygaaga waqtiyadan ayaa sidoo kale kaa caawin doona, maadaama heerkulku uu sii qabownaan doono.
Rottweilers iyo Labradors labaduba waxay leeyihiin daaman xoog leh, sidaa darteed ciyaar jiidaha dagaalka ah had iyo jeer si wanaagsan ayey hoos ugu dhici doontaa! A nother favorite waa soo qaadista caadiga ah .
Markii aad si fiican u dhex gasho bulshada, u oggolow shaybaarkaaga xadhigga meelaha furan waa hab fiican oo iyaga looga gubo xoogaa xoog ah.
Ha la yaabin haddii eeyahaagu xitaa ka weynaado habeenkii.
Iyaga oo dabeecadaha eyda ilaaliyaha ah , aad ayey muhiim u tahay inaad ku tababbarto Rottador.
Dareenkeeda ilaalintu waxay si fudud ugu rogi kartaa gardarro xagga dadka ama xayawaanka aan la garanayn.
Iyagu waa eeyo caqli badan, oo u heellan inay ka farxiyaan, sidaa darteed tababar joogto ah oo xoojin ah, waa inaad si dhakhso leh u yeelataa eey si wanaagsan isu dheellitiran.
Bulsheynta xirmadan farxadeed ayaa muhiim u ah heerarka hore ee horumarka.
Ku soo bandhigida shaybaarkaaga 'Rottweiler Lab Mix' dad badan oo da 'kasta leh iyo eeyaha kale waxay bari doonaan in dadka iyo duunyada oo dhan aysan khatar ahayn.
Waxay noqon karaan eeyo dayactir aad u sarreeya leh, marka marka aad dhammaysatid laabtaada iyo dhunkasho , iyaga oo siiya qalab ay ku ciyaaraan ama xujo ayaa maskaxdooda ka dhigeysa mid firfircoon kana fogaaneysa dabeecadaha wax halaagga sida qayilaadda iyo qoditaanka.
Goorma ayaa loo yimid eeygan isku dhafan, waxaa muhiim ah in la fiiriyo arrimaha caafimaadka ee ku dhici kara labada waalid waalidkood.
Bixiyeyaasha wanaagsan waa inay awoodaan inay bixiyaan shahaadooyin caafimaad (tusaale ahaan dhibcaha sinta, dhibcaha xusulka iyo indhaha) labada waalidba; Tani waxay kaa caawin doontaa inaad go'aamiso arrimaha caafimaad ee eygaaga ay u badan tahay ama ka yar tahay inuu dhaxlo.
Xaaladdan oo kale Labrotties way u nugul tahay sinta iyo xusulka dysplasia taas oo saameysa Rottweilers iyo Labradors labadaba.
Labradors sidoo kale waxaa loo yaqaanaa hunguri weyni waxayna u nugul yihiin cayilnaanta, taasoo keeni karta cudurka macaanka , sidaa darteed hubi in eeygaagu uu ku raaxeysto cunno isku dheelitiran oo ay weheliso jimicsi joogto ah.
Rottweiler Lab Mix wuxuu jecel yahay inuu ku xirnaado sintaada, markaa haddii aad raadineyso eey is madadaalinaya inta aad shaqada ku jirto waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dib uga fikirto.
Noocan adag ee rabitaanka leh qof walba kuma aha. Iyagu waa eeyo awood badan oo caqli badan sidaa darteed wax badan ayey noqon kartaa in la maareeyo milkiilaha markii ugu horreysay.
Haddii aad kalsooni ku qabtid, khibradna gadaashaada ka haysatid, Labrottie-ka ayaa aad ugu faraxsan inuu soo koobo dhammaan jacaylka aad u leedahay inaad bixiso!
Taas bedelkeeda, waxaad heli doontaa eey aad u daacad ah oo adiga iyo qoyskaagaba kaa ilaalin doona qiimo kasta ha ku qaadatee.
Tani orso weyn waxay noqon kartaa saaxiibkaaga jimicsiga ee soo socda wuxuuna hubaal kugu qancin doonaa inaad ka maqnaato maylkaas dheeriga ah!
Noo dhaaf fikirkaaga, oo la wadaag khibradahaaga noocyadan isku dhafan ee hoose faallooyinka.
Dhammaan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Wax Ku Saabsan Isku Qasan Pitbull Mastiff Mix
louisiana cathoula leopard eyda eey
noocee ah isku dhafka eyga
xuduud collie shaybaarka isku darka dabeecadda
sawirka eeyga doodle dahab ah